ဝက်ဘ်ဆိုက် Take II
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 27, 2010 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 နစ်ခ် Carter က
ငါနှင့်အတူယနေ့နံနက်ကြီးစွာသောစကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့ပါတယ် ဂျေဘီ သေးငယ်တဲ့ကနေ။ Jeb ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းမသိဘူးဆိုရင်မင်းဘယ်မှာလဲ။ ) နှစ်ကြိမ်ရိုက်ချက်ကိုမတော်တဆအမိန့်ပေးခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနှင့်ကျွန်ုပ်လက်များကိုယခုအချိန်အထိမကိုင်နိုင်တော့ပါ။ သူပြောခဲ့တာကကဖိန်းဓာတ်မြင့်မားစွာမပါဘဲဒီလောက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
“ ဒါဆိုမင်းရဲ့ပစ်မှတ်ဖောက်သည်တွေကဘယ်သူတွေလဲ” ငါစက်မှုလုပ်ငန်း, အရွယ်အစားနှင့်အခြားနယ်ပယ်ဖော်ပြရန်အကြောင်းကြားရန်မျှော်လင့်, ငါမေးတယ်။
"ကျနော်တို့ကကုမ္ပဏီရဲ့ဒုတိယ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပါ။ " Jeb ပြောတယ် သူတို့ဟာအနည်းဆုံးတစ်ခါတစ်ခါဒီဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။
ဒုတိယလား သူကအခြားသူရဲ့အင်္ကျီနောက်ကိုလိုက်ချင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သူကသူဟာဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အရမ်းယုံကြည်မှုရှိနေတယ်၊ ​​ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကျော်လွှားချင်နေတယ်။ မဟုတ်။ သူကစမတ်ဝယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်။ သူတို့လိုချင်တာကိုသိတဲ့သူ၊ ဘာကြောင့်သူတို့လိုချင်တာလဲ၊ ((အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်) မလုပ်ခဲ့သော) အလုပ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးသင့်မှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မရှိပါကတစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။ Jeb ရဲ့ညာဘက်။ သင်၏အကြောင်းအရာ၊ ဒီဇိုင်း၊ ရေတပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြောင်းလဲခြင်းအမှတ်အသားများစသည်တို့ကိုအချိန်နှင့်အမျှဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောလိပ်ကျောင်းသား၏အကြီးတန်းစီမံကိန်းအတွက်ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့် ၃ လကြာတော့မင်းမှားသွားပြီဆိုတာသိတော့မယ်။ အခုဆိုရင်သင်မှားယွင်းတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်အနည်းငယ်မှားသွားနိုင်တယ် ဒါပေမယ့်မင်းမှားနေပြီ
စိတ်မပူပါနဲ့ မှားတာကမှန်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ ပင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကျွမ်းကျင်သူ Robby Slaughter, flat-out ကျရှုံးဖို့လူတွေကိုအားပေးတယ်။ Jeb ပြောရရင်သင်မှားသွားပြီဆိုရင်တောင်နည်းနည်းမှားသွားပြီဆိုရင်သူကသူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီ။ ယခုသူသည်သင့်အားအမှန်တကယ်ကူညီနိုင်ပြီးသူ၏အရည်အချင်းများကိုသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
သင့်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိပြီးသားဆိုပါစို့။ အလုပ်ဖြစ်လား သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နေပါသလား။ အဘယ်ကြောင့်ပြန်လည်လုပ်မ?
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်းမလုပ်မီအချိန်ကလူများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအာမခံကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလူအများကဆက်ဆံကြသည် ပထမ ဦး ဆုံးပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့“ အရောင်ရင့်ဖို့” အရမ်းကုန်ကျတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမျှတဖို့ ၁၀ ကီလိုဂရမ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်များတဲ့အပိုင်းကိုသုံးဖို့လိုတယ်။ ပြီးတော့၊ ပုံနှိပ်ပြီးတာနဲ့၊ အနည်းဆုံးတစ်နှစ် (သို့) ဒီထက်ပိုပြောင်းဖို့မပြောပါနဲ့။ အဲဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ, တကယ်အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်နည်းပညာကဒီ quintessential marketing tool ကိုအမြဲတမ်း beta ထဲမှာသိမ်းထားရန်၊ ဘယ်တော့မှပြန်လည်လုပ်ရန်မကြောက်ပါနဲ့။
သင်၏ပထမဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်ခြင်း၏လေ့လာမှုအတွေ့အကြုံကိုအစားထိုး။ မရပါ။ သို့သော်ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် II သည်အမှန်တကယ်ထူးခြားစေသည့်ဆိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၃၊ ၄၊ ၅ ကိုယူလျှင်ပိုကောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်သင် - သင်လုပ်လိုသောအဆင့်ကိုမမရောက်မီ - ငါယူရန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားရန်ရှိသည်။ အဆင်သင့်၊ မီး၊ ပြီးတော့, ထပ်ခါတလဲလဲရည်ရွယ်ချက်။
အီးမေးလ်သေပြီလား Jenni & Janneane ကိုဒါကိုမပြောပါနဲ့
Red Bit အပြာရောင် bit
27:2010 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 57
Jeb ရဲ့ နည်းဗျူဟာကို သဘောကျတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးဆွဲသူအနေဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုသောဖောက်သည်များအား ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်- ၎င်းတို့သည် ယခင်ကတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ဖူးပါသလား။
ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက် အလွတ်ကိုင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝဘ်ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာကို နှစ်သက်တယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ (ကျွန်ုပ်နှင့် ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ) ဆက်ဆံရေး ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ဆော့ဖ်ဝဲသည် ပိုကောင်းလာသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆိုက် (တည်းဖြတ်ရန် နှိပ်ပါ)
27:2010 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 01
"မင်းရဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်က အလုပ်လုပ်နေသလား" ကုမ္ပဏီအများစုသည် "အလုပ်လုပ်ခြင်း" အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်မှာ သဲလွန်စမရှိဟု ကျွန်တော်ငြင်းဆိုလိုပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဝဘ်ဆိုဒ်လုပ်ငန်းမှာ မပါဝင်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ Inbound စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်အများစုအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်များကို မတည်ဆောက်ပါ… Jeb လို လူများအတွက် အကောင်းဆုံးပဲကျန်တော့သည်… သို့သော် ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသည် အလားအလာရှိသူနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ကြားရှိ လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လမ်းခင်းပြီး သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်း သေချာပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ5ရက် 2010 ခုနှစ် ညနေ 4:46 နာရီ
အဲဒါအမှန်ပါပဲ! မင်းရဲ့ ပထမဆုံးကြိုးစားမှုက သေချာပေါက်နီးပါး ဆိုးလိမ့်မယ်။
The Mythical Man-Month ၏စာရေးဆရာ Fred Brooks က ဤသို့ဆိုသည်– “စွန့်ပစ်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲပါ။ မင်း ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်မယ်။"